Ufuna Ukuba Yi-SEO Specialist? Semalt inikeza impendulo
AGBUDE Felix orodje
Ngaba unomdla wokufumana indawo yakho ibekwe kakuhle kwi injini yosesho iziphumo? Ukuba kunjalo, ngoko kufuneka ufunde i-ins kunye nokuphuma kwe-injini yokwenza uphando kwaye uzame ukuba nguchwepheshe we-SEO. Kule nto, kuya kufuneka ufunde iindlela ezahlukeneyo kunye nezicwangciso ezinokuphucula amanqanaba akho kwiwebhusayithi. Utyalo-mali kwizakhono zakho ze-SEO uza kufumana iziphumo ezifunwayo ngaphakathi kweentsuku ezimbalwa. Konke okufuneka ukwenze ukufunda iindlela ezahlukeneyo nezindlela.
I-Ross Barber, uMphathi weNtengo kaMthengi we-12 (Semalt , uchaza apha ukuba abe ngumfundi we-SEO.
Okokuqala, kufuneka ufunde iziseko ze-SEO, kwaye oko kwenzeka kuphela xa ufunda ngayo kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo kunye neencwadi. Umzekelo, tyelela ibhulogi esemthethweni ukuba ube nombono wento ye-SEO kunye nendlela yokubeka indawo yakho kwisiphumo se-injini yokusesha. Unokuzama kwakhona uMoses kunye ne-Search Engine Land ukuba ungene kwi-SEO ngendlela engcono. Ezi zifanele ukuba iiwebhusayithi ziqalise kwaye zibe ngu-SEO ingcali njengoko zisinika amanqaku amaninzi kunye nolwazi malunga nokuphuculwa kweenjini zokukhangela..Landela ii-SEO kwi-Twitter kunye ne-Instagram kwaye uqaphele ngokucacileyo oko babelana ngako kwiiplatifti zabo. Kumele ujoyine amaqela e-Facebook malunga nokuphuculwa kweenjini zokukhangela kwaye ukhangele i-updates nezinye izazi ezabelwana ngazo kuluntu.
Khangela iinkqubo zoqeqesho
Iinkqubo ezahlukeneyo zoqeqesho ziyafumaneka kwi-intanethi malunga nokuphuculwa kweenjini zokukhangela. Unokufunda i-SEO ngeenkqubo ezihlawulwe okanye ezingakhokhelwa. Unokujonga kwakhona ii-blogs ze-SEO kunye neewebhsayithi apho iingcali zikwabelana ngeengcebiso ezahlukeneyo kunye namaqhinga ukwazi okuningi malunga ne-SEO esisiseko kunye nephambili. I-Yoast inika kwakhona ii-SEO ezisiseko kunye nokubhala rhoqo amanqaku kwiindwendwe ezahlukeneyo. Kwabo abanomdla wokufunda i-SEO, izifundo ezahlukeneyo ziyafumaneka kwi-intanethi. Ngokomzekelo, iNoMo kunye neNgcaciso yoMhlaba weeNjini zinika abasebenzisi babo izinto ezininzi ezinxulumene ne-SEO. Unokufunda isiseko se-SEO, indlela yokubhala umxholo ogqwesileyo wewebhu kunye nokuphucula ukubonakala kwesosiza yakho, indlela yokubamba imiba yobugcisa yenkqubo yokuphucula injini kunye nokusebenzisa idatha ehleliweyo kumaphepha akho ewebhu.
Iindidi ezimbini zeengcali ze-SEO
Kukho iindidi ezimbini zeengcali zokucwangcisa injini, kwaye kufuneka ube neengcamango zabo: abaphuhlisi abazi zonke izicwangciso zokuthengisa kunye nabathengisi abasebenzisa iikhowudi ukuphumeza iiwebhusayithi. Ukufunda kwe-SEO kwenziwa lula xa uwazi umahluko phakathi kwezi ntlobo ezimbini zeengcali. Abanye banembopheleleko yokuthumela nokubhala amanqaku ekhwalithi, ezinye zijolise ekuthengiseni imidiya yoluntu, ngelixa abanye bahlawula ingqalelo ekwakheni i-backlinks kunye nokukhawulela indawo yakho.
Ukuze ube yi-SEO ingcali yonke, uza kufuneka ufunde yonke into malunga neengcali ezimbini ze-SEO kunye nendlela abaqhuba ngayo imisebenzi engcono. Ngaphezu koko, kufuneka uqhelane nemibandela yobugcisa kunye neyobugcisa bomsebenzi. Kukhuselekile ukuthetha ukuba ukuba yi-SEO kuya kuthatha ixesha, ngoko akufanele uxhalabele nantoni na. Qhubeka ufunda kwaye wandise ulwazi lwakho ukuphumelela kwihlabathi le-intanethi.